कसको कारण हुन्छ बस दुर्घटना ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार कसको कारण हुन्छ बस दुर्घटना ?
कसको कारण हुन्छ बस दुर्घटना ?
२०७६, ३ पुष बिहीबार ०८:१२
केही दिनअघि मात्र सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा १५ जनाले ज्यान गुमाए भने १८ जना घाइते भए । सिन्धुपाल्चोकमा महिना दिनभित्र भएको यो दोस्रो ठूलो दुर्घटना थियो । गत कात्तिक तेस्रो साता सिन्धुपाल्चोककै सुकुटेमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जना नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने चार दर्जन घाइते भएका थिए ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत वर्ष सडक दुर्घटनामा २ हजार ७ सय ८९ को निधन भएको थियो भने गत साउनदेखि हालसम्म ९ सय २१ जनाको निधन भएको छ ।
पछिल्लो सिन्धुपाल्चोकको सडक दुर्घटनापछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले चासो देखाएका छन् । उनले सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गरे भने दुर्घटना रोक्नेबारे कदम चाल्न निर्देशनसमेत दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुर्घटनाको छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ ।
अहिले दुर्घटना हुनुको कारणबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सरोकारवाला निकायहरू भने एकले अर्कालाई दोष दिएर पन्छिने दाउमा देखिएका छन् ।
दुर्घटना न्यूनीकरणबारे बुधबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले मानवीय कारण नै दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको बताए । उनले सिधै नअथ्र्याए पनि चालकको लापर्बाही र व्यवसायीको कारण दुर्घटना हुने गरेकोमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्ने गरेको तर त्यो सडक सवारी चलाउन उचित भए नभएकोबारे सेफ्टी रोड अडिट नहुने हुँदा त्यसले पनि दुर्घटना निम्त्याउने गरेको बताए ।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले भने सडककै कारण दुर्घटना हुने गरेको दाबी गरे। उनले साँघुरो बाटो, लामो समय पिच नगर्ने तथा विभिन्न ठाउँमा रेलिङ नहाल्दा बढी दुर्घटना निम्तिएको बताए । सार्वजनिक रूपमा नै उनले काठमाडौं कोरिडोरको निर्माण कार्य सुस्त भएको भन्दै ढिलाइप्रति प्रश्न उठाए ।
ट्राफिक प्रहरीका उपत्यका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्तो सडक छ भनेर चासो राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘सडक दुर्घटना कम गर्न आमनागरिकले पनि सहयोग गरिदिनुप¥यो, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिका भित्रको सडक कस्तो छ भनेर ख्याल गरिदिन प¥यो,’ उनले भने ।
कसको कारण हुन्छ दुर्घटना ?
ग्रामीण सडक इन्जनियरिङ बिना जथाभावी बनाइएको छ । गाडी गुड्न उपयुक्त छैनन् तर ट्र्याक खोल्ने होडबाजी रोकिएको छैन । देशमा ८३ किलोमिटर हजारभन्दा बढी सडकमा मात्रै १४ हजार किमि मात्रै पिच भएको छ । मुख्य गरेर सडक बाटो र मौसमको अवस्था, गाडी र गाडी चालकको अवस्था, गाडीभार क्षमता र गाडीको गतिको कारण बढी मात्रामा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यसमा मुख्य दोषी सरकार देखिन्छ, मुख्यतयः भौतिक संरचनाको उचित मर्मतसम्भार नहुँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको हो ।
दोस्रोमा चालकको कारण दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । लापर्बाही गरेर तीव्र गतिमा सवारी हाँक्दा गाडी दुर्घटना हुने गरेको छ । चालकको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछ । ‘हरेक ४÷४ घण्टामा चालकले आराम गर्नुपर्छ’ एसएसपी ढकाल भन्छन् । थोत्रा सवारी र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर चलाउनुले पनि सडक दुर्घटना बढेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
Previous articleनेपाल लिम्पियाधुरासम्मै हाे, भारतको एकपक्षीय निर्णय मान्दैनाैँ : प्रधानमन्त्री
Next articleअवैध रुपमा अमेरिका पुगेका पाँच नेपालीलाई फर्काउन चार्टर्ड विमान